Ukwahlukana kokwabiwa kweenguqu ezinokungabonakali kuyinto ebalulekileyo. Le nombolo ibonisa ukusasazeka kokusabalalisa, kwaye ifumaneka ngokukhawulela okuqhelekileyo. Esinye esasetyenziswa ngokusasazwa ngokukhawuleza yiyo yokusabalaliswa kwePoisson. Siza kubona indlela yokubala ukuhluka kwe-Poisson ukusasazwa ngeparameter λ.
Ukusabalaliswa kwePoisson kusetyenziswa xa sinokuqhubeka komnye uhlobo kwaye sibalwa utshintsho oluchanekileyo ngaphakathi kwesi sigqibo.
Oku kwenzeka xa sicinga inani labantu abafika kwi-countertikithi ye-tiketi ye-movie kwixesha leyure, gcina ithrekhi yenani leemoto ezihamba nge-intersection ngeendlela ezine zokuma okanye ubale inani leziphene ezenzeka ebude bomnxeba .
Ukuba senza iingcamango ezimbalwa ezicacileyo kule miba, ke ezi meko zifanisa iimeko zePoisson. Emva koko sitsho ukuba ukuguquguquka okungahleliwe, okubalwayo kwinani leenguqu, kunokwabiwa kwePoisson.
Ukusabalaliswa kwePoisson ngokubhekiselele kwintsapho engapheliyo yokuhambisa. Ezi ntlawulo ziza zixhotywe ngeparameter enye λ. Iparameter yile nombolo yenene enxulumene nendawo ekulindelekileyo yenguqu ephawulwe kwi-continuum. Ukongeza koko, siya kubona ukuba le parameter ilingana nokuthethiwa kokusasazwa kodwa kukwahlukana kokusabalalisa.
Umsebenzi wokumisa umlinganiselo we-Poisson ukusasazwa unikezelwa ngu:
f ( x ) = (λ x e -λ ) / x !
Kule binzana, ileta ye -e iyinombolo kwaye iyisoloko imathematika kunye nexabiso elilingana nelingana ne-2.718281828. Utshintsho x luba nayiphi na inani elingu-nongative.
Ukubala intetho ye-Poisson ukusasazwa, sisebenzisa lo msebenzi wokuvelisa umzuzu .
M ( t ) = E [ e tX ] = Σ e tX f ( x ) = Σ e tX λ x e -λ ) / x !
Ngoku sikhumbula i-series ye-Maclaurin. Ekubeni nasiphi na isiphumo somsebenzi u- e , zonke ezi ziphumo ezivandlakanywe kwi-zero zinika yona 1. Isiphumo soluhlu lwe- u = Σ u n / n !.
Ngokusetyenziswa kwechungechunge lwe-Maclaurin, siyakwazi ukubonisa umzuzwana owenza umsebenzi njengengqungquthela, kodwa kwifom evaliweyo. Sidibanisa yonke imigaqo kunye ne-exponent x . Ngaloo M ( t ) = e λ ( e t- 1) .
Ngoku sifumana ukungafani ngokuthatha i-derivative yesibili ye- M nokuvavanya oku ku-zero. Ekubeni uM '( t ) = λ e M ( t ), sisebenzisa umgaqo weemveliso ukuba sibone i-derivative yesibili:
M '' ( t ) = λ 2 e 2 t M ( t ) + λ e M ( t )
Sivavanya oku ku-zero kwaye sifumane ukuba uM '' (0) = λ 2 + λ. Emva koko sisebenzisa i- M '(0) = λ ukubala ukuhluka.
Var ( X ) = λ 2 + λ - (λ) 2 = λ.
Oku kubonisa ukuba iparameter λ ayinanto kuphela yokusabalalisa iPoisson kodwa ikwahluka kwayo.
10 I-Dinosaurs efile kakhulu yeErazoic Era
Isikhokelo sokusebenzisa i-Soir and Soirée ngesiFrentshi
Ingxoxo yokuqala: Ukupheka